Tianjin Yuanzheghe Technology Development Co., Ltd., (YZH Plastic) yakatangira Tianjin Yilimi Plastic Products Co., Ltd., yakavambwa muna 2017. mabhokisi ekudya epurasitiki anoraswa, uye akazvipira kupa vatengi chikafu chemhando yepamusoro.Mugadziri wekurongedza zvigadzirwa.Iyo kambani iri muTianjin Jinghai Economic Development Zone, padyo neTianjin Port, ine nyore yekufambisa negungwa, mugwagwa uye njanji, uye yakagadziridzwa zvinhu..
Kusvika pari zvino, tine mazana emhando dzezvigadzirwa zviripo kuti zvisangane nezvido zvemusika zvakasiyana, Nemhando yepamusoro, mutengo wemakwikwi uye yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi, zvigadzirwa zvedu zvinozivikanwa zvakanyanya uye zvinovimbwa nevatengi vanobva kumusika wepamba nekune dzimwe nyika.
Yakajairwa odha yekugadzirisa uye nzira dzekutumira, dzakasanganiswa nesevhisi yenguva, shuwa kuti vatengi vanogona kukurumidza kushandisa zvigadzirwa nemasevhisi edu.Nguva yese iyi, tichivimba nezvigadzirwa zvakagadzirwa nehunyanzvi, kugadzirwa kwakanakisa uye manejimendi ekuchengetedza, kukwana kwehuwandu hwehuwandu, uye nemhinduro yemusika inoshanda, takapa vatengi vepamba nevekunze mabasa ari nani uye anoshanda.
Isu takaita kwakasimba kwehutongi hwemhando mune yega yekubatanidza yemuenzaniso kugadzirira-yakawanda kugadzirwa kurongeka-kurongedza uye kuendesa kunosangana nepamusoro miitiro yevatengi.customized masevhisi aivepo futi!
YZH Plastiki yagara ichitsigira pfungwa yekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kuchengetedza uye kushanda kwepamusoro, inova zvakare nzvimbo yekutanga uye kupera kwekutsvaga nekuvandudza zvigadzirwa zvakasiyana.Isu takazvipira kupa vatengi zvinhu zvine hutano, zvakatipoteredza uye zvinoshanda zvigadzirwa, nguva dzose kutanga kubva kune zvinodiwa uye zvinofarirwa nevatengi.
YZH Plastiki inotsigira pfungwa yekuvandudza yevashandi nekambani inokura pamwechete, uye inopa vashandi nzvimbo yekudzidza uye mamiriro ehunyanzvi hwehunyanzvi.Yakagadzira mhepo yakanaka umo vashandi vane hanya nekusimudzira kwekambani uye kambani ine hanya nekugara zvakanaka kwevashandi uye kukura.
YZH Plastiki inogara ichitenda kuti mhando ndihwo hupenyu hwebhizinesi, kuvimbika mweya webhizinesi, uye vashandi ndivo musana webhizinesi.
Iye zvino, takagadzirira kuvhura musika wepasi rose.Nemwoyo wose kutarisira kugamuchira kubvunza kwako!